အိုင်ဖုန်း ၇ - ဝီကီပီးဒီးယား
(iPhone7with Qualcomm modem)
(iPhone7Plus with Qualcomm modem)
(iPhone7with Intel modem)
(iPhone7Plus with Intel modem)
GSM, CDMA2000, EVDO, HSPA+, LTE, LTE Advanced
စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၆; ၃ နှစ် အကြာက (၂၀၁၆-၀၉-16)
iPhone 7: Smartphone
iPhone7Plus: Phablet
၁၃၈.၃ mm (၅.၄၄ in) H
၆၇.၁ mm (၂.၆၄ in) W
၇.၁ mm (၀.၂၈ in) D
၁၅၈.၂ mm (၆.၂၃ in) H
၇၇.၉ mm (၃.၀၇ in) W
၇.၃ mm (၀.၂၉ in) D
7: ၁၃၈ g (၄.၉ oz)
7 Plus: ၁၈၈ g (၆.၆ oz)
Original: iOS 10.0
Current: iOS 10.1.1, released အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ (၂၀၁၆-၁၀-၃၁)
2.34 GHz quad-core (two used) 64-bit ARMv8-A
Apple G9 custom GPU (hexa-core)
based on Power VR Series7XT Plus 
7: 3.80 V 7.45 W·h (1960 mA·h) Li-Po7Plus: 3.82 V 11.10 W·h (2900 mA·h) Li-Po
7: ၄.၇ in (၁၂၀ mm) Retina HD: LED-backlit IPS LCD, 1334×750 px resolution (326 ppi)
7 Plus: ၅.၅ in (၁၄၀ mm) Retina HD: LED-backlit IPS LCD, 1920×1080 px resolution (401 ppi)
7: 12 MP 2nd-generation Sony Exmor RS with six-element lens, quad-LED "True Tone" flash, autofocus, IR filter, Burst mode, f/1.8 aperture, 4K video recording at 30 fps or 1080p at 30 or 60 fps, slow-motion video (1080p at 120 fps and 720p at 240 fps), timelapse with stabilization, panorama, facial recognition, digital image stabilization, optical image stabilization7Plus: In addition to above: A telephoto lens with 2× optical zoom / 10× digital zoom
LTE (bands 1 to 5, 7, 8, 12, 13, 17 to 20, 25 to 30), TD-LTE (bands 38 to 41), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) (802.11n: 2.4 and5GHz), Bluetooth 4.2, NFC, GPS & GLONASS
Models A1660 & A1661:
TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) & CDMA2000 EV-DO Rev. A and Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
အိုင်ဖုန်း ၇ နှင့် အိုင်ဖုန်း ၇ ပလက်စ် တို့သည် အက်ပဲကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော စမတ်ဖုန်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့၌ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် တင်ကွတ်က မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ နှင့် အောက်တိုဘာလများအတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နိုင်ငံများတွင် စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။
ဒီဇိုင်ပိုင်းတွင် အိုင်ဖုန်း ၆အက်စ်နှင့် ဆင်တူသောလည်း အရောင်အသစ်၊ ရေစိုခံနိုင်မှု၊ အိမ်ခလုတ် အသစ်၊ နားကြပ်အပေါက် မပါရှိတော့ခြင်း တို့ ကွဲပြားခြားနားသွားသည်။ အတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ကာ ဖုန်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ရုပ်ထွက် စွမ်းဆောင်ရည် နှင့် ကင်မရာစွမ်းရည် များကိုပါ မြှင့်တင်ပေးထားသည်။ အိုင်ဖုန်း ၇အက်စ် ပလက်စ်တွင် ပိုမိုဝေးကွာသော အကွာအဝေးရှိ ဝတ္ထုများကို ရိုက်နိုင်ရန်အတွက် မှန်ဘီလူး တစ်ခု အပိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသည်။
၄ အိုင်ဖုန်းထွက်ရှိမှု အချိန်မှန်တမ်း
အိုင်ဖုန်း ၇ သည် အိုင်ဖုန်း ၆ နှင့် အိုင်ဖုန်း ၆အကစ် တို့၏ ဒီဇိုင်း အတိုင်းအထွာ နှင့် ဆင်တူသည်။ ယခင်က ထုတ်ဖူးသော ရွှေရောင်၊ ငွေရောင် နှင့် နှင်းဆီရွှေရောင် အပြင် အမည်းရောင်(ရိုးရိုး) နှင့် အမည်းရောင်(ပြောင်လက်) တို့ကို အရောင်အသစ် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အမည်းရောင် (ပြောင်လက်) မှ ပိုမိုရင့်သော အမည်းရောင်ကို သုံးထားပြီး ပြောင်လက်နေစေရန် စီမံထားသည်။ အိုင်ဖုန် ၇ သည် ရေ နှင့် ဖုန် ဒဏ်ခံနိုင်မှု မှာ အိုင်ပီ၆၇ ရှိသည်။
အိုင်ဖုန်း ၇၏ အိမ်ခလုတ်ခုံမှာ ယခင်အိုင်ဖုန်းများတွင် ပါဝင်သကဲ့သို့ ခလုတ်အစစ် မဟုတ်တော့ပဲ အတုအယောင် ခလုတ်ကိုသာ ထည့်သွင်းထားသည်။ အိုင်ဖုန်း ၇ တွင် အိုင်ဖုန်း ၆ အက်စ်တွင် စတင် ထည့်သွင်းပေးခဲ့သော "၃ဒီ ထိတွေ့မှုစနစ်"ကို ထပ်မံ ထည့်သွင်းပေးထားသည်။
အိုင်ဖုန်း ၆ (အပေါ်) နှင့် အိုင်ဖုန်း ၇ (အောက်) တို့၏ အပေါက်များ ကွဲပြားမှု
အိုင်ဖုန်း ၇ တွင် နားကြပ်အပေါက် ပါဝင်တော့ခြင်း မရှိတော့ပေ။ အိုင်ဖုန်း ၇ တွင် ပါဝင်လာသော နားကြပ်မှာ အားသွင်းပေါက်တွင် တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အားသွင်းပေါက်မှ နားကြပ်ပေါက်သို့ ပြောင်းလဲပေးသော ကြားခံပစ္စည်းကို သီးခြား ရောင်းချသည်။ အိုင်ဖုန်း ၇ သည် အက်ပဲချပ်စ်ဆက် အေ၁၀ ၆၄ ဘစ် ကို အသုံဂပြုထားသည်။ အဆိုပါ အေ၁၀ ချပ်စ်ဆက် သည် ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်မှုကို ပိုမိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပြီး ကွန်ဆိုး ဂိမ်းများဆော့သည့်အခါ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ အိုင်ဖုန်း ၇ သည် အရွယ်အစား ၂ မျိုး ရရှိနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင် ၄.၇ လက်မ အရွယ် နှင့် ၅.၅ လက်မ (ပလက်စ် အမျိုးအစား) ဖြစ်သည်။  အိုင်ဖုန်း ၆အကစ် ၏ မျက်နှာပြင် အရွယ်စားနှင့် သိပ်သည်းဆမှာ ထပ်တူထပ်မျှ တူညီသည်။ သိုလှောင်နိုင်မှု ပမာဏမှာ 32 GB၊ 128 GB နှင့် 258 GB ရရှိနိုင်သည်။ မှတ်ဉာဏ်မှာ အိုင်ဖုန်း ၇ တွင်2GB နှင့် အိုင်ဖုန်း ၇ ပလက်စ် တွင်3GB ပါဝင်သည်။
ကင်မရာ မှန်ဘလူး ၂ ခု ပါဝင်သော အိုင်ဖုန်း ၇ ပလက်စ်
အိုင်ဖုန်း ၇ တွင် 12 MP ရှိသော ကင်မရာ တပ်ဆင်ထားသည်။ ကင်မရာ ရိုက်နေစဉ်အတွင်း တုန်ခါမှုကို လျော့ချပေးနိုင်သည့် Optical Image Stabilization ကို ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ အိုင်ဖုန်း ၇ ပလက်စ်တွင် နောက်ထပ် 12 MP ရှိသော ကင်မရာ တစ်ခု အပိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါ ကင်မရာ အပိုကြောင့် အဝေးရှိ အရာဝတ္ထုများကို ၂ ဆ ပိုမိုနီးကပ်စွာ ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ရှိ ကင်မရာကို7MP ကင်မရာအဖြစ် တပ်ဆင်ပေးထားသည်။
အိုင်ဖုန်း ၇ များတွင် အိုင်အိုအက်စ် မိုဘိုင်းဖုန်း လည်ပတ်မှုစနစ် ၁၀.၀ ဖြင့် ထွက်ရှိလာခဲ့သည်။  အိုင်အိုအက်စ် ၁၀.၁ တွင် အိုင်ဖုန်း ၇ ပလက်စ် ဖုန်း သီးသန့်အတွက် ကင်မရာ အဆင့်မြှင့်တင်မှု ရရှိခဲ့သည်။
Line 186: color:phone7 from:09/16/2016 till:07/08/2020 text:"[[IPhone 7|iPhone 7]] 32 GB"
Date '07/08/2020' not within range as specified by command Period.
Line 187: color:phone7 from:09/16/2016 till:07/08/2020 text:"128 GB"
Line 189: color:phone7+ from:09/16/2016 till:07/08/2020 text:"[[IPhone 7|iPhone7Plus]] 32 GB"
Line 190: color:phone7+ from:09/16/2016 till:07/08/2020 text:"128 GB"
Line 192: color:phone8 from:09/22/2017 till:07/08/2020 text:"[[IPhone 8|iPhone 8]] 64 GB"
Line 193: color:phone8 from:09/22/2017 till:07/08/2020 text:"256 GB"
Line 194: color:phone8+ from:09/22/2017 till:07/08/2020 text:"[[IPhone 8|iPhone 8 Plus]] 64 GB"
Line 195: color:phone8+ from:09/22/2017 till:07/08/2020 text:"256 GB"
Line 240: color:phonexs from:09/21/2018 till:07/08/2020 text:"[[IPhone XS|iPhone XS]] 64 GB"
Line 241: color:phonexs from:09/21/2018 till:07/08/2020 text:"256 GB"
Line 242: color:phonexs from:09/21/2018 till:07/08/2020 text:"512 GB"
↑ iPhone7– This is 7။ Apple။ September 7, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rogerson၊ James။ "iPhone7Plus release date, news and features"၊ September 12, 2016။ September 8, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ iOS Benchmarks။ Primate Labs (September 16, 2016)။ September 16, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The iPhone7has an exciting new feature that Apple is keeping secret။ BGR (October 27, 2016)။ November 1, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ A Look Inside Apple’s Custom GPU for the iPhone။ Real World Technologies (October 25, 2016)။ November 1, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ iPhone7Teardown။ iFixit (September 16, 2016)။ September 16, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ iPhone7Plus Teardown။ iFixit (September 16, 2016)။ September 16, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Apple iPhone7Teardown။ Chipworks (September 15, 2016)။ October 12, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ iPhone7specs။ September 16, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ ၁၀.၃ "iPhone7and7Plus announced with water resistance, dual cameras, and no headphone jack".
↑ "How Apple Made Its Jet Black iPhone None More Black".
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ Stein, Scott; Dolcourt, Jessica (September 8, 2016).
↑ "iPhone7home button doesn't work with most gloves".
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ "Apple will sell replacement iPhone7headphone adapters for $9 each".
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ Benjamin, Jeff (September 8, 2016).
↑ "Apple's new A10 Fusion processor is 120 times faster than the original iPhone".
↑ "iPhone7vs iPhone7Plus (Comparison)".
↑ "Improving Color on the Web".
↑ "The iPhone 7: More Camera, More Colors, Less Headphone Jack".
↑ Slivka, Eric (September 16, 2016). "iPhone7Teardown Reveals 'Incredibly Thin' A10 Chip With2GB RAM, Intel Modem".
↑ "With the iPhone 7, Apple Makes Dual Cameras the New Normal".
↑ "The iPhone7Plus has two cameras that work as one".
↑ "iOS 10: Release date, the best features and what iPhones and iPads you can get it on"၊ Telegraph Media Group၊ September 8, 2016။ September 8, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on September 8, 2016။
↑ Clover၊ Juli (October 24, 2016)။ Apple Releases iOS 10.1 With New Portrait Mode for iPhone7Plus။ MacRumors။ October 24, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Apple's first wireless chip is the new W1 for wireless AirPods"၊ 2016-09-07။ September 8, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Apple intros totally wireless AirPods and3new Beats wireless headphones that use new W1 chip"။ September 8, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Apple Won’t Release First-Weekend iPhone7Sales Numbers။ 12 September 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ iPhone7and iPhone7Plus Shatter Records at T-Mobile (September 13, 2016)။ September 14, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Apple Inc. (2007-2018). iPhone News - Newsroom Archive. Retrieved June 7, 2018.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုင်ဖုန်း_၇&oldid=501855" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၂၀:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။